राजाबादीको आन्दोलनले झस्किए प्रधानमन्त्री ! सर्वदलिय बैठकमा राखे यस्ता एजेण्डा - Aajako Nepali Khabar
Home समचार राजाबादीको आन्दोलनले झस्किए प्रधानमन्त्री ! सर्वदलिय बैठकमा राखे यस्ता एजेण्डा
राजाबादीको आन्दोलनले झस्किए प्रधानमन्त्री ! सर्वदलिय बैठकमा राखे यस्ता एजेण्डा
समचार admin December 8, 20200Comment
काठमाडौ राजाबादीको आन्दोलन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक सुरु भएको छ। विभिन्न जिल्लामा राजावादीहरुको आन्दोलन बढ्दै गएको बेलामा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलिय बैठक बोलाएका हुन् । काठमाडौ लगायतका मुलुकका मुख्य शहरहरुमा केही दिन यता राजावादीहरुको आन्दोलन सुरु भएको छ ।
राजतन्त्र र हिन्दुराज्य पुनस्थापनाको माग गर्दै ठूलै आन्दोलन हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलिय बैठकको आह्वान गरेका थिए । समसामयिक विषयमा छलफल गर्न भनी आह्वान गरिएको बैठकमा मुख्य नेताहरु सहभागी भएका छन् । बालुवाटारमा सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बैठकको आवश्यकतावारे सुरुमै प्रकाश पारेका थिए ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिकले दलहरूको बैठक बालुवाटारमा सुरू भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले जानकारी दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले बैठकको सुरूमै सहभागी नेताहरूलाई स्वागत गर्नुहुँदै आजको छलफल आयोजना गर्नुपर्ने उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताएका छन्, ‘उहाँको जोड कोभिड–१९ को नियन्त्रण, प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा, संविधानविरोधी र हिं’सा’त्मक गतिविधिहरूको विरोधमा एकजुट हुन सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ।’संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुलाई सो बैठकमा आह्वान गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।